Erina Iwasaki – The girl who can speak5languages! – SHLAWIMI SHOP
Home Woman full of story is always BEAUTIFUL Erina Iwasaki – The girl who can speak5languages!
Woman full of story is always BEAUTIFUL
Posted On July 11, 2017 at 7:19 pm by	piano.chin / No Comments
Sis တို့ရေ လူတစ်ယောက်ရဲ့ Life Story ကြောင့် သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားဖူးခဲ့လား???
ခုရက်ပိုင်း French, English, Chinese, Japanese and Burmese စတဲ့ဘာသာစကား (၅) မျိူး တတ်ကျွမ်းပြီး ယဉ်ကျေးရည်မွန်တဲ့ ဂျပန်အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Erina Iwasaki ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
Erina ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်က သူမဟာ ဘာသာစကားအများကြီးတတ်တဲ့အပြင် ( ငယ်ငယ်ကတည်းကဘာသာစကားအများကြီးတတ်တဲ့လူကိုအရမ်းအားကျတယ်) Education နဲ့ Music အပိုင်းမှာလည်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
Erina သည် Khayay School ၏ Curriculum Director ဖြစ်ပြီး Myanmar Music Festivalရဲ့ Associate Director တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက USA, Republic of congo in Africa, Myanmar, France and Japan စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအတွေ့ကြုံများပြားပြီး ရဲရင့်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Let’s get to know more about her!
သူမသည် အသက်(၃)နှစ်အရွယ်မှစတင်၍ UN Officer ဖြစ်သူ သူမ၏ဖခင်နှင့်အတူ နိုင်ငံတကာတွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ၏ Education Experience ကိုခံစားရရှိခဲ့သည်။ Pre School ကို New York တွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Primary School ကိုတော့ Republic of Congo in Africa မှာ French School ( French School the only schooling that existed there) အနေနဲ့စတင်တက်ရောက်ခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင်လည်း French School ကိုရွေးခြယ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်၏ French School တွင် High School မရှိသောကြောင့် အသက်14နှစ်မှစ၍ Master ဘွဲ့ရသည်အထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပညာသင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် Master 2nd Year ကို USA Smith Collage တွင် Scholarship နဲ့ တက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းပြီးသည့်အခါ သူမ၏မိသားစုနေထိုင်ရာ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး Khayay School တွင် multilingual curriculum developing ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက နိုင်ငံတကာတွင် လည်ပတ်နေထိုင်ခဲ့သော်လည်း Where do I belong? လို့ အမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့ အချိန်မှာ မွေးရပ်ဖြစ်သော Japan နှင့် အကြာဆုံးနေထိုင်ခဲ့သော France မှာလည်း Really belong to မဖြစ်တာကြောင့် မိသားစုရှိရာနေရာသာလျှင် Home ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ကိုရွေးခြယ်ပြန်လာခဲ့သည်။
Culture မတူသော နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အခက်ခဲတွေကိုလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ Erina သည် အခက်ခဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာတော့ Face it and transform what is perceived weakness into strength and own it ဆိုတဲ့ ယူဆချက်နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ယခင်က သူမ၏ life story ကို ရှင်းပြချက်တွေများလို့ sharing သိပ်မလုပ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတွင် သူမရဲ့ life story ကြောင့် positive impact ဖြစ်အောင် share လုပ်ပါသည်။
Erina share ချင်တဲ့ယူဆချက်ကတော့ ” Not worry so much about what othe rs say and be true to yourself ! “
ယခုခေတ်မှာဆိုရင် ဘာသာစကားတစ်ခုထဲနဲ့ရပ်တည်ဖို့က competitive မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူမသည် ဘာသာစကားများများတက်လေ Future competitive ဖြစ်လေလို့ ယုံကြည်သည့်အတွက် Education ပိုင်းတွင် Khayay school မှာ Multilingual Curriculum ကို အဓိက Developing လုပ်သည်။
Erina သည် Music ကိုလည်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားသည့်အတွက် Myanmar Music Festival ကို2014 ခုနှစ်တွင် American pianist Kimball Gallagher, Taiwanese pianist Kaiyin Huang နှင့် အတူ ပူပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Music Festival လုပ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ Erina သည် Classical music lover တစ်ဦးဖြစ်ကာ Paris တွင် နေထိုင်ခဲ့စဉ်ကလည်း concerts တွေသွားကြည့်လေ့ရှိတယ်။ Music သည် လူတစ်ယောက်၏စိတ်ခံစားချက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သော power ရှိတဲ့အတွက် မြန်မာပရိသတ်ကိုလည်း ခံစားစေချင်လို့ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Erina သည် သူမ၏အလုပ်ကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်အောင်မြင်အောင် အလွန်ကြိုးစားပြီး ယခုဆိုလျှင် New York တွင် Multilingual education နှင့်ပတ်သက်တဲ့ PHD သွားတက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ရည်မှန်းချက်ကတော့ Multilingual education ကို မြန်မာပြည်တွင် ယခုထက်ပိုအောင်မြင်စေရန်ဖြစ်သည်။
Erina ကတော့ beauty ဆိုတာက မမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။ Beauty က ကိုယ့်ရဲ့ life story နှင့် confidence ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော Feeling တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ life ကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိမှသာလျှင် beautiful ဖြစ်ပါတယ်။ Beauty is in your story!
Erina ကိုလည်း ယခုလို Sharing လုပ် ပေးတဲ့အတွက် Shlawimi မှ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Erina ၏ Life Story ကို စိတ်ဝင်စားကြသော Sis တို့ like & share လုပ်နိုင်ပြီး မေးခွန်းရှိရင်လည်း comment box တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။
Woman full of story is always BEAUTIFUL !
Woman full of story is always beautiful – Interview